ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमाथि संसदीय समितिले छानविन गर्ने ! « Etajakhabar
ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमाथि संसदीय समितिले छानविन गर्ने !
प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १७:२९
काठमाडौं, १ फागुन । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनैतिक काममा संलग्न भएको अभियोगमा विशिष्ठ श्रेणीमा रहेका ब्यक्तिहरुका बारेमा पनि घटना बाहिरिएका छन् । छानविनमा त्यस्ता ब्यक्ति पर्ने क्रम बढीहरेको छ । नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्री माथि पनि छानविन हुने भएको छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उजुरी परेपछि छानविन हुने भएके हो । संसदिय समितिले उनी माथि परेको उजुरी उपर सुनुवाई गर्दै छानविन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको कार्यदलले उजुरीमाथि छानविन गरकेो हो । उनले आफ्नो कार्यकालमा फास्ट ट्र्याकसहित बिभिन्न ठेक्का पट्टा र खरिद निर्णयका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।
नेकपाका सांसद रेखा शर्मा,नवराज सिलवाल र कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू सदस्य रहेको कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा पछानविन गर्नुपर्ने सुझाव समेटेको छ । सेनाको मुख्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको थियो ।
समिति सदस्य झपट रावलले उजुरीमा सुरक्षा निकायका अधिकारीले करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने रहेको बताएका थिए । फास्ट ट्र्याक निर्माण, हेलिकप्टर खरिद जस्ता विषयमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार भएको समितिका सदस्यहरुले दावी गरेका छन् ।
४ आश्विन २०७७, आईतवार १९:१४
४ आश्विन २०७७, आईतवार १९:०७
४ आश्विन २०७७, आईतवार १८:३७
४ आश्विन २०७७, आईतवार १८:१७